China Custom Eyelash Packaging Soft Thick Handmade 25mm 3d Mink Eyelash mveliso kunye nabenzi | Weiti
1, Ibanga eliphezulu le-100% yoboya benene be-mink
2, Ngobuchwephesha obenziwe ngezandla ukuqinisekisa umgangatho ophezulu
I-3, 25mm imivimbo emide eshinyeneyo
I-4, inokuphinda isebenze kwaye ihlala ixesha elide ukuya kuma-25 ukuya kuma-30 ekusebenziseni
Ixesha elide & eliQinisekileyo kunye neFluffy
√ Yandisa amehlo akho ngemivimbo yamehlo obuxoki
Ikhaphukhaphu kwaye inokusetyenzwa kwakhona, imivumbo eyenziwe ngesandla, engenabundlobongela ilungile kuwo nawuphi na umsitho kunye nemilo yamehlo; baya kongeza ivolumu, ubunzulu kunye nenkcazo yeziphumo ezihlala ixesha elide, ezibonisa ukumisa.
Yenziwe ngesandla, igqibelele
I-25mm mink eyelashes yethu yobuxoki zonke zenziwe ngesandla, sinika ingqalelo kwelona mgangatho ubalaseleyo, ukuze ugoso kunye nokujija kweenkophe kungokwemvelo. I-eyelashes yethu yobuxoki idibanise kakuhle i-eyelashes yakho yendalo, yandisa ubude kunye nevolumu, kwaye wenze ukubukeka okuhle. Iphuhlisiwe ukuphucula ubuhle bakho kunye nobuntu.
Us Iyasebenziseka kwaye ihlala ixesha elide
Nangona uninzi lwe-mink eyelashes oluyinyani lukuvumela ukuba uphinde usebenzise amaxesha angama-10, i-25mm mink eyelashes yamanga yenziwe ngobunono kwaye inokusetyenziswa ixesha elide, amaxesha angama-30 okusetyenziswa, ngaphandle kokuphulukana nomtsalane wayo.
√ Ithambile kwaye ikhululekile ukunxiba
I-eyelash ye-mink ekhangeleka yendalo yenziwe ngebhanti yomqhaphu, kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ithambile kwaye iyindalo ngaphandle kwebala, ukunciphisa ukungonwabi kokunxiba iinkophe zobuxoki.
Yomelele kwaye akukho lula ukubuna
Ukupakisha okuhle kunye nelebheli yesiko
Izitayile ezahlukeneyo esele zilungile
Ukuprintwa kwelogo yeelhashe:
1, Ukulungiselela ukupakisha kwe-eyelashe esele ilungile, sihlala sisebenzisa indlela yokushicilela ye-UV
Ukuprintwa kwe-UV yinkqubo yokuprinta esebenzisa ukukhanya kwe-ultraviolet ukomisa nokunyanga ii-inks. Kuyimfuneko ukuba utshatise i-inki enefotosensitizer nesibane esinyanga i-UV.
2, Ukupakishwa kwe-eyelash eyenzelwe wena, sixhasa indlela eyahlukeneyo yokushicilela
Elungiselelweyo logo yabucala kwiphakheji, ngesiqhelo sixhasa ushicilelo lwesilika lesilika, ushicilelo lwe-UV, ukunyathela ubushushu njalo njalo. Kufuneka usixelele nje ukuba ufuna siphi isiphumo, emva koko sinokwenza ngokuchanekileyo njengemfuneko yakho.
Ubushushu Ukunyathela Ukuprinta
Ungayifaka njani imivumbo engeyonyani?
Thatha i-eyelashes yobuxoki ofuna ukuyinxiba kwibhokisi kwaye ugcine ibhokisi ukugcinwa ngokulula emva kokusetyenziswa.
Sebenzisa i-eyelash tweezers ukususa iinkophe zobuxoki kwitreyi.
Linganisa imivimbo ukuya kumgca wendalo.
Egqithileyo Iibhokisi zeeleyibheli zabucala ezenzelwe wena iFluffy 25mm Mink Eyelashes
Okulandelayo: Ihowuliseyili ileyibheli yabucala eyi-100% eyenziwe ngenkohlakalo yasimahla kwi-3D Mink eyelashes Umthengisi
China Factory Bulk 3d iliso imivumbo Wholesale 25mm ...
Ihowuliseyili Volume Strip Eyelashes 100% Mink Thic ...
Imivimbo yamehlo, eyeliner, Izandiso zeEyelash, Abathengisi bee-Eyelash, I-liner yamehlo, Imivimbo ye-mink,